Njani ukwenza umboniso wesilayidi usebenzisa AVS Ividiyo Umhleli - IVIDIYO INCOKO - ubomi Dating - live streams!
Ukuba ufuna ukwenza umboniso wesilayidi ukusuka zedijithali iifoto usebenzisa zethu AVS Ividiyo Umhleli evumela ukuba ukwenza angaphakathi uhlobo kunye ezahlukeneyo ujikeleziso lothunyelo phakathi imifanekiso, captions okanye izimvo, ividiyo iziphumo kwaye soundtrackOkokuqala, ukungenisa yakho iifoto kunye namajelo eendaba iifayile luyafuneka (umzekelo, aziingceba a ividiyo okanye i-audio irekhodi ukuba isetyenziselwa njengoko isiqalo umculo) izikhundla iifayile kwi-ummandla wexesha: Storyboard. Cinezela Storyboard iqhosha kwibar ummandla wexesha: Yesixhobo ukuswitsha ukuba Storyboard imboniselo emele ukulandelelana yakho wongeza iifoto. Ukutshintsha ukulandelelana imifanekiso nceda-ekunene nqakraza kwi omnye imifanekiso kwi-Storyboard, kwaye usebenzisa iinketho ekhohlo Ukuya ekunene kwi imenu yentsingiselo (ekunene nqakraza). Icwangcisa ngokwe xesha ngexesha apho photo eboniswa kwi desktop. Khetha luyafuneka umfanekiso kwaye nqakraza Ixesha kwi storyboard-Toolbar. Kwi-evuliweyo window, faka luyafuneka ixabiso kwaye nqakraza KULUNGILE. Ukuba ufuna lungelelanisa ukukhanya, umahluko umfanekiso, khetha ngokwendlela Storyboard kwaye cinezela Umbala iqhosha kwibar storyboard Yesixhobo ukuvula umbala window. Kwi-Storyboard imboniselo cinezela ujikeleziso lothunyelo qhosha kwi-umbindi kwekhusi. Zonke ezikhoyo ujikeleziso lothunyelo ziboniswa Iifayile neziqhamo Indawo. Baya ezisekiweyo yi-iindidi kwicala lasekhohlo lwenkqubo window.
Ukwazi ngakumbi nceda jonga zethu kwi-intanethi uncedo
Ukongeza ezinye ezithile ujikeleziso lothunyelo kuqala khetha u-imifanekiso kwi-Storyboard phakathi apho ufuna ukongeza transition, akunjalo-nqakraza kwi transition kwi-Iifayile neziqhamo Indawo kwaye yongeza kwabo elinye emva kwelinye usebenzisa khetho Ukudibanisa kwaye buyisela transition. Ukusebenzisa enye transition phakathi zonke iifoto zakho khetha Faka transition bonke ukhetho kwi-keyboard menu (ekunene nqakraza). Isicelo ujikeleziso lothunyelo i-seed engenamkhethe sebenzisa i Faka jikelele ujikeleziso lothunyelo khetho.
Lungelelanisa transition ixesha ngokukhetha into efunekayo transition kwi-Storyboard kwaye nqakraza i Transition iqhosha kwibar storyboard-Toolbar.
Kwi-evuliweyo window, faka efanelekileyo ixabiso kwi-transition Ixesha mhlaba kwaye nqakraza KULUNGILE. Le window unako kanjalo bonakalisa transition kuwe ekhethiweyo kulo mboniso. Nqakraza Umbhalo qhosha kwi-umbindi kwekhusi. Khetha isikhokelo umbhalo kwi-Iifayile neziqhamo Indawo. Nolahlo ekhethiweyo imodeli kwi umgca we-ummandla wexesha: faka. Lokulungiswa ubude bexesha umbhalo, ekhohlo-nqakraza omnye kwimiphetho: wokubhaliweyo block kwaye ukugcina iqhosha le mouse icinezelwe, uyitsale kwindawo babuza indawo. Cofa kabini umbhalo block ukuvula iimpahla window. Kwi-bonisa indawo evuliweyo window, nqakraza-emiselweyo okubhaliweyo kwaye uhlobo into ofuna.
Ungakhetha kwakhona isicelo ividiyo iziphumo yakho ntetho.
Ukwazi njani ukwenza ukuba nceda jonga esi salathiso. Ukuba ufuna ubungqina kwaye yongeza ezinye amagqabantshintshi imifanekiso nqakraza kwi Ilizwi qhosha kwi-umbindi kwekhusi. Qinisekisa ukuba isandisi-sandi ifakiwe kwi-PC yakho isandi ikhadi. Icwangcisa ukungena parameters kwiqela lenjongo Imbali ilizwi, indawo yakho ummandla wexesha: isalathisi ukuba luyafuneka indawo kwi ummandla wexesha: kwaye nqakraza i Qala kokubhala iqhosha. I qhosha liyimfuneko yintsimi Yeka le ukushicilela. Cofa ukumisa kokubhala nangaliphi na ixesha. Ukongeza i-audio ingoma, nqakraza kwi Library kwi-umbindi kwekhusi kwaye khetha isixhobo sekhompyutha Enesandi category e ngaphezulu umda. Tsala i-faka ngaphambili aphesheya ingoma ukususela Iifayile neziqhamo Indawo kwi-manani kuba enesandi remix ye-ummandla wexesha. Ukuba nawe futhi ke yenza umboniso kwi-DVD ulungiselelo okanye Iblue-ray, unako kanjalo yenza kwimenyu ye-cd. Cofa kwi Imenyu qhosha kwi-umbindi kwekhusi. Qiniseka ukuba kufuneka yenziwe ukhetho Kwimenyu ye-fd intliziyo. Nqakraza-emiselweyo isimbo kwi-Iifayile neziqhamo Indawo isicelo ngayo kwi-ntetho. Tsala i-faka umfanekiso okanye ividiyo ifayili evela Iifayile neziqhamo Indawo emsebenzini Iindawo ezikhoyo ezantsi lwenkqubo window. Khetha Isihloko, tshintsha isiqalo Umculo kwaye khetha Inani izahluko kwi-iphepha emasimini ezilungele Izicwangciso candelo. Ungakhetha kwakhona ngokwahlula - ntetho kwi thematic izahluko. Ukongeza isahluko nqakraza kwi Izahluko iqhosha kwicala lasekhohlo lwenkqubo window, tsala i-ummandla wexesha: isalathisi kwi-babuza incopho kwaye nqakraza i Dibanisa iqhosha kwibar Yesixhobo ye-ummandla wexesha.
Kuphila incoko Kwi-i-Cairo
Saka Chicago: a Dating site Ngendi
ividiyo incoko kuba ngabantu abadala omdala Dating ividiyo esisicwangciso-mibuzo roulette-intanethi free ividiyo incoko kunye guys ividiyo incoko roulette free Chatroulette unxibelelwano esisicwangciso-mibuzo roulette ividiyo incoko Chatroulette Dating inkonzo ividiyo incoko Dating ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko dating